Britain: Donald Trump oo booqashadiisii rasmiga ahayd nasakhay – Kasmo Newspaper
Britain: Donald Trump oo booqashadiisii rasmiga ahayd nasakhay
Updated - January 12, 2018 2:43 pm GMT
London (Kasmo), Madaxweynaha Maraykanka, Donald Trump, ayaa nasakhay booqashadisii u horreysay ee rasmiga ahayd ee London, taas oo qorshaysnayd bisha dambe, laguna beegay munaasibadda furitaanka xarunta cusub ee safaaradda Maraykanka.
Safarka Donald Trump, in kasta oo aan rasmi ahaan loogu dhawaaqin, wuxuu u noqon lahaa safarkiisii u horreeyay oo si rasmi ah uu ku yimaado Britain isaga oo Madaxweyne ah.
Qaar ka mid ah Warbaahinta Maraykanka iyo Britain waxay baajinta safarka la xiriiriyeen munaasibadda furitaanka dhismaha cusub ee safaaradda, taas oo ku timid rabitaanka Madaxweynihii hore, Barack Obama.
Obama ayaa lahaa go’aankii lagu iibiyay dhismihii hore oo ku yiillay xaafadda Mayfair ee bartamaha London, qiime gaaraya $ 1,2 Bilyan oo Dollar, si loogu guuro aagga daafaha xiga ee koofurta wabiga Thames. Trump ayaa marmarsiinyo ka dhigtay in aanu la dhacsanayn qorshihii Obama ee lagu iibiyay dhismihii hore ee safaaradda iyo goobta cusub ee loo xulay, sidaa darteedna ka jari doonin xarigga furitaanka dhismahaas.
Wargayska The Telegraph ayaa qoray, in kasta oo Obama lagu dhaleecaynayo, Maraykanku in ay horey ugu dhawaaqeen in safaaradda loo rari doono xarun cusub, bishii Oktoobar 2008, xilligii George Bush talada hayay.
Sababahaas la sheegay ka sokow, safarka Madaxweynaha waxaa loo baajiyay cabsi laga qabo rabshado ka qarxa Britain oo idil. Sannadkii 2017 codsi wadajir ah (Petition) oo looga soo horjeedo booqashada Trump wuxuu gaaray saxiixa in ka badan 1 malyuun oo qofood.
Sidaa darted munaasibadda furitaanka dhismaha cusub ee safaaradda waxaa, halkii Donald Trump, matali doona Xoghayaha Arrimaha Dibadda, Rex Tillerson.
R’iisal Wasaaraha Britain, Theresa May, oo aan wax faallo ah ka bixin arrinta waxay horey isugu dheceen Trump bishii Nofember, markii Madaxweynuhu Twitterka ku wadaagay muuqaallada koox xagjir ah oo islaamka neceb.
Tillaabadaasi ma noqon mid laga jeclaystay Downing Street, oo dhaqanka Madaxweynaha Maraykanka ku tilmaantay “Mid khaldaan ah”. Laakiin xiriirka ayaa caadi ku soo noqday ka dib markii 19kii Disembar, 2da mas’uul khadka taleefanka uga wada hadleen geedisocodka nabadda Bariga Dhexe.